WBOn humna Addaa oromiyaa ta’uudhaan diina biyyarraa kokkee qabnee baafna jedhee leenjii koollejjii poolisii oromiyaatti fudhataa jirru – Kichuu
HomeNewsAfricaWBOn humna Addaa oromiyaa ta’uudhaan diina biyyarraa kokkee qabnee baafna jedhee leenjii koollejjii poolisii oromiyaatti fudhataa jirru
WBOn humna Addaa oromiyaa ta’uudhaan diina biyyarraa kokkee qabnee baafna jedhee leenjii koollejjii poolisii oromiyaatti fudhataa jirru bifa kanaan haamilee guutuudhaan qoophii xumuraa jira diinni oromoof oromiyaa salphatan saamtonniif gantoonni siif dhufee Abbaan boolla qotadhu….!!!!
Reebicha hadhaawwaa kana OPDO tu Wayyaanota qe’ee Oromoorra naanessuutiin raawwachiisaa turte. Kan karaa agarsiisu OPDO dha. Kan tumu TPLF dhaa. Waan OPDOn saba Oromoorran geessifte Tigreenuu hingeessifne. Ammas taanaan hamma kaadiroonniifi kaabinoonni maqaa haaromsaatiin akka waan jijjiiramne dhufee biyyi gegedderameefi jireenya qannoo jiraatan dhabasmiifamanitti Oromiyaan nagaa hinargattu. Mee sababa Qeerroofi Qarree ficcisiisaa tureef Kaabinee OPDO mana hidhaatti darbatame tokkittii maqaa naaf kennaame. Jiraa? Egaa Qeerroon tumamaa oole kun torban kana Bekele Gerbafi jawar Siraj n Oromummaan maal akak ta’e barsiisaa jira. Yeroo qeerroon akkasiin dararamaa ture Jawar Amarikaa keessaa Shiishaafi Bargarii Harkisa. Bekele Gerbas yoo ta’e mana hidhaatti nytaa filatamaatu
gegeddarameefi dhaqaa ture. Gargaarsi gurguddaanis biyya alaa kanaa dhaqaafi ture. Kan yeroo sana rooba rasaasa Abiddaa keessa dhaabbatee falmataa ture Qeerroodha. Qeerroo afaan hinukkaamsiin. Oggantoonni keenya warra reebamaa jiran kana malee Xwalwwaallee Ergama OPDO fe’attee sabboonummaafi falamannaa Qeerroofi Qarree busheessuuf Oromiyaatti bobbaate miti.
Bekele Gerba fi Jawar Siraj ergamni itti kennamee akka bobba’an quba qabaadhaa!!!
Dhugaan Beekamuu qaba!
Amma ilmaan abashootaa warri miseensa OPDO ta’aniifi ilmaan Oromoo (OPDO) ta’anii diina faana lafaafi qabeenya Oromiyaa saamaafi Oromoo irratti roorrisaa turan tayitaa irra jiranitti, Oromiyaa keessatti nagaan waan bu’uu natti hinfakkaatu. Fakkeenyaaf, mee hojii Admaasuu (Komunikeeshiinii Motummaa Oromiyaa), Siilashiifi Saamu’eel (Ministeera Barnoota) ilaala. Lammaan maaliif jarreen akkasii bobaa jala kaayyachuun taayitaan guddisaa akka deemuu naaf hingalle. Kana qofa miti; hololtoota akka saree raqa garaa guuttannaaf jecha kan akka Milkeessaa, Adisu fi Taue hololaaf hamma
bobabafattee jirtutti OPDOn ofiis nagaa hinargattu; sabnis nagaa hinargatu. Maali jamaa waggaa 28 Wayyaanee faana Oromoo qorqitee boossisaa turteetti ammammoo dhaaba Birootti hinlaattuu OPDOn kun? Bari garaa dhaloota hundaa keessaa haqamteettiim. Oromoon kan calliseef xiqquma Lammaa Magarsaafi Dr. Abiya Ahmed’n qofa ilaaleeti. Kanaa achi caasaan OPDO erga laamsha’ee waggaaa 4 irra darbeera.
“Filannoo dhufu irratti dorgomuu baadhuus, qarqara dhaabadhee hin taajjabu’’ – Birtukaan Miidhagsaa
Suuraan tokkichi argitan kuni , guyyaa hardha uummata hedduu social media irratti kan dudubachiisaa ooleedha.
Hedduun jaalalaaf gammachuun isa simate.
Hedduunis mirga namni tokko qabu kan garsiiseedha jechuun kan hubates hedduudha.
Kan qeequuf kan balaaleefatuus akkasuma.
Garuu immoo anaaf suuraa addaafii ergaa guddoos qabduudha.
#galannii keessan guddaadha.
Eeyyeen #ABO_SHANEEDHA. maaltuu nu dhoorka.
siyaasa kufaa baattee maqaa website kana balleessite waanuma kanarratti maxxanfamuulee wallaltee maqaan si badee namuu sirra baqatee ofumaa maxxansitee ofuma dubbista beeladda sammuu jaamaa kitaabaa bittadhuu dubisii ergasii as debi’iitti katabu calqabi